DARDAARANKA XILDHIBAANADA QARANKA, GUDIGA ANSHAXA IYO GUDIGA FULINTA EE BARLAMAANKA!
Waxaa shaley oo bishu aheyd 05/2-2017 soo dhamaadey soo jeedintii qorshaha siyaasadeed ee musharaxiinta u sharaxan xilka madexweyne. Mudo sadex beri ayay 23.musharaxiin ku soo bandhigayeen qorshahooda siyaasadood iyo waxa ay qaban doonaan, hadey ku guuleystaan xilkaa.
Qoraalkan oo ah dardaaran ku socdaa xildhibaanada qaranka oo ka kooban 329 xubnood, ayaa go`aamin doona arbacada soo socota, 8/2-2017 mustaqbalkeena nololeed dal iyo dadba. Ka mas`uul noqoshadaa baahida shacab ka badan 12. malyan, oo hadana mudo ka badan 20 sano soo dhibaateysnaa, waa mas`uuliyad aad iyo aad u quwad weyn marka laga fiiriyo baahida dadka iyo dalka. Hadana waa mas`uuliyad aad iyo aad u fudud marka laga fiiriyo xilka uu xildhibaanka ku dhaartey, oo ah inuu ugu adeegi doono danta dalka iyo dadka.
Dear xildhibaan, diintayadu waxey na bareysaa in aan taariikhda is xasuusino, si aan ugu cilmi qaadano. Waxaa nalagu tilmaamaa in aan nahney dadka aduunka isku jinsiga ah, hadana is laa`ayay oo welina heshiin la`. Taasoo macnaheedu tahey in doqonimo naloo qarinayo. Waxaa kaloo nalagu tilmaamaa inaan nahney dalka aduunka ugu musuq-maasuq badan, oo hadana la masruufo. Waxaa kaloo nalagu tilmaamaa inuu dalkeenu yahey meesha aduunka ugu nolol xun, hadana ugu halista badan, iyadoo ay xaqiiqdu tahey in qaninimada Ilaah nagu muteystey, ay umado kale ku raaxeysanayaan. Mudo 30.sano ku dhawaad ayaa nalagu sheekeysanayay. Nala yasayay. Daciifnimo aan ka sharaf weyn nahney ogolaaney. Dad aanu superior u aheyn, u ogolaaney in ay naga sareeyaan maantey. Ri`walbaa, meeshey isdhigtaa lagu qalaa maashaa la yiri. Anagaa is badney bahdilidaa. Laakiin hadaan badali karnaa fikradaa, hadaad xildhibaanow albaabka koowad noo furtid. Taasoo ah inaad codkaaga siiso hogaamiyaha naxariiste u leh dalka iyo dadka.
Dear xildhibaan, mudanayaal iyo marwooyin, maantey aduunka isbedelo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale ayaa ka jira, oo saameyn weyn nagu yeeshey, naguna yeelan doono. Isbedelka cimilada iyo abaaraha aan dhamaaneyn, waa qeyb ka mid ah saameyntaa isbdedel. Waxaad mas`uul ka tahey 5ta malyan ee gaajada iyo haraad qarka u saaran in ay u le`daan. 400.000 oo ka mid ah 5.taa malyan waa caruur 5.sano jir ka yar. Waa mustaqbalkeenii beri. Xildhibaan waxaa kaloo mataleysaa baahida 2da malyan ee qaxootiga ku ah dalka gudihiisa. Waxaa kaloo mataleysaa malaayiinta soomali ee dibaha ku nool. Dhib iyo faa`iido waxey ku sugnaadaanba. Isbedelada siyaasadeed, xisbiyada dhanka midig oo ku soo badaneyso dunida reer galbeedka, naceyba diinta islaamka iyo qaxootiga oo soo xoogsanaya. Dalka iyo dadka ku sugaya maantey waa dad u baahan from scratch in laga soo dhiso. Intaa waa tusaalooyin yar yar oo ku saabsan howsha weyn ee ku sugeysa oo aadan keligaa qaban karin, hadaan dooran hogaamiye iyo dowlad kuu sahleysa wax qabadkaaga.
Dalkan Norwey oo aan ku noolahey, mas`uul siyaasina ka mid noqdey, ayaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahey dalalka aduunka ugu taajirsan. Dalkan waxuu hada ka cabanaya cadada dadka waaweyn (duqooshinka) oo aad u soo kordhaya. Waxaa lagu qiyaasey markii la gaaro 2025 in 16% oo bushada ka mid ah ay duqooshin noqon doonaan. Then waxaa lays weydiiyay dhibkaa wuu imaniye, ee sidee baan wax looga qaban karaa? Ma shaqooyin dhanka daryeelka ayaa la abuuraa? Mise canshuurtaa la badiyaa oo hadii 16% bulshada ka mid ah aysan shaqeyn karin? Mise nidaamkan daryeelka `welfare system`ayaa wax laga badelaa. Xalinta dhibkaa wel-wel weyn ayay xisbiyada ku tahey. Laakiin xildhibaan, adigu dhibkaa ma qabtid, oo 70% shacabkaaga waa dhalinyaro. Waana kheyraad lagu faano. Nasiib xumase dhalinyaradaa ma heystaan maantey waxbarasho iyo shaqo kaafisha. Hadaba xildhibaan sidee uga bad-baadin kartaa dhalinyaradaa xagjirka, tahriibka iyo waxyaalaha xun xun hadaadan heysan dowlad kula shaqeysa. oo qaban karta waxaad u dejiso.
Doorashadan waa tii igu horeysen in my entire life aan xiiso weyn u muujiyo oo la socdo. Waxaan daaraasaad badan ku sameeyay musharaxiinta wax qabadkood, aqoontood iyo qiimaha ay bulshada ku dhex leeyihiin. Waxaa mar walbaa dhagaheyga soo jiita taageerida aan xadka laheyn ee loo hayo musharax madaxweyne Mohamed A. Farmaajo. Dadka wanaag bey ka sheegayaan. Hami weyna bey u hayaan. Waxey soo daliilsadaan wax qabadkiisii hore. Waxyaalaha ay dadku ku amaanayaan musharaxaa waxaa ka mid ah
In mudadii gaabneyd ee uu ahaa ra’iisul wasaaraha iyo howlihii dhaxalka lahaa ee uu ka tagey.
Waxey ku amaanaan inuu yahey qof qoolka ka run sheega.
Oo amaanada iyo cadaalada ilaaliya.
Qof dadka u shaqeeya xaquuqdood ilaaliya.
Qof midnimadu ay ku weyn tahey oo ka soo horjeeda faragelinta umadaha shisheeye.
Qof aaminsan in madax-baanaanideena qaranimo ay ku xiran tahey xoojinta amniga iyo dhisida ciidanka qaranka Soomaaliyeed.
Waxaa xaqiiq ah hadey maantey jiri laheyd awood u madax banaansho cod, inuu Farmaajo guuleysan lahaa. Farmaajo waxaa loo arkaa inuu yahey hogaamiye daacad ah oo dalka iyo dadkaba naxariis u hayo. Xildhibaan, u adeego bulsho ayaa tahey, qiimee dareenka iyo rabitaanka shacabka. Oo codkaaga sii hogaamiyaha ay dadku ku hanweyn yihiin oo ay halyey u arkaan. Kaana waa mudane, madaxweyne Mohamed A. Farmaajo
Dear gudiga anshaxa iyo gudiga fulinta, Ilaah ha idiin sahlo howsha culus ee idin sugeysa. Waari meysidee, tariikh wanaagsan reebo, ayaa maantey jirta. Maantey waa maalintii taariikhda. Naga qabta kuwa aan noo ogoleyn inaan horumar gaarno. Cadowna u ah guusheena iyo midnimadeena.
Waxaan noo rajeyn dhamaanteen dal iyo dibad jood Guul waarta iyo hiil qaran.